भीम विरागको सिंगो आकाश ~ brazesh
February 28, 2012 whatever I feel, नेपाली No comments
बिहानै एक जना मित्र राजेश केसीको ट्विटमा 'भीम विराग आर. आइ. पी.' भनेर लेखिएको देख्दा एक पटक आङ्ग ढक्क फूल्यो । हुन त भीम विरागले ७८ वर्षमा टेकिसकेका थिए । पोहोर साल पनि बेस्मारी बिरामी परेका थिए । यस पटक पनि अस्पतालमा भर्ना भएको कुरा केही दिन अघि थाहा भएको थियो । भेट्न जान पाइएको भने थिएन । संसारमा कसैको पनि अजम्मरी देह हुँदैन भन्ने पनि थाहा नभएको कहाँ हो र ? तर यति सबै हुँदाहुँदै पनि त्यो ट्विट लाई आँखाले सही पढे पनि मनले एकै पटक स्वीकार गरेन । दुइ पटक पढेपछि मात्र जिन्दगीको अन्तिम र कटु यथार्थ घन बनेर दिमागमा ठोक्कियो ।
"अन्त्यसम्म पनि नझुकेको शिर"] [/caption]
उनले एकपटक गुनासो गरेका थिए, "मैले सिंगो आकाश कहिले पनि हेर्न पाइनं ।"
उनको संकेत आफ्नो कुप्रिएको शरीर प्रति थियो । ठाडो भएर उभिन नसकेकोमा उनले गरेको त्यो गुनासोको उत्तर मैले नेपाल साप्ताहिकमा भर्खरै लेख्न सुरु गरेको स्तम्भ मार्फत दिएको थिएँ । सिंगो आकाश हेर्नुको अर्थ के हो र जीवनका कष्टलाई जितेर आफ्ना सिर्जनाका माध्यमबाट लाखौं पाठक र श्रोताहरुलाई लोभ्याउने उनी जस्ता अथक सर्जकको तुलनामा हामी पो सिंगो आकाश नदेख्नेहरु हौं भनेर मैले उनको भनाइको प्रतिवाद गरेका थिएँ । (२०६५ फाल्गुण ११ गते नेपाल साप्ताहिकमा मेरो स्तम्भ "बायाँ फन्को" मा त्यो स्तम्भको लिंक)
मिजासिला र फरासिला भीम विरागसंग त्यसपछि पनि केही आत्मीय भेट भएका थिए । पछि आफ्नो श्वासप्रश्वासको रोगलाई काठमाण्डौंको हावा सुहाएन भनेर आफ्नो जन्मथलो हेटौंडा जानु भएपछि उहाँसंग भेट हुन सकेको थिएन । कहिले कहीं च्याटमा उनकी छोरी आभा भेटिन्थिन्, दाइको हालखबर सोध्थें, उनी ठीक छ भन्थिन्, बुबाले तपाईंलाई खूबै सम्झनुहुन्छ भन्थिन्....बस् ।
"सहर ठूलो मात्र हैन, निर्दयी पनि भएको छ हगि ?"